Makedonia: Mitohy Misondrotra Ny Vidin-tsolika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2012 2:22 GMT
Ny fisondrotana tsy mitsahatry ny vidin-tsolika no anton'ny olana maro ho an'ireo vahoaka ao Makedonia, ary ny sasany tsy misalasala miresaka ilay fihenjanana anaty hanihany. Sampan-draharaha iray mpandrindra manokana no nametra ireo vidin-tsolika, ary betsaka tokoa ireo mpampiasa ny tambajotra sosialy no misakana ny hizaràna ny anjaran'ny hafa amin'ny tamberim-bidy ho lasan'ny governemanta, sakana ho an'ny fampandrosoana ny sehatry ny fandraharahàna.
Ao amin'ny bilaoginy, Zoriv dia namoaka fampitahàna ny vidin-javatra azo avy amin'ny fanodinana solika ao Makedonia, Etazonia sy ny Fiombonambe Eraopeana [mk], ary koa nikajy ny fatran-tsolika azon'ny olona iray vidiana amin'ny karama salantsalany any amin'ny firenen-tsamy hafa [mk]. (Amin'ny teny Makedoniana avokoa ireo lahatsoratra roa, saingy ny tabilao fampitahàna isaky ny firenena dia amin'ny teny Anglisy mora takarina.)
Araka izany, raha ny fijerin'i Zoriv, Latvia no manana ny vidin-tsolika ambany indrindra ao Eraopa (EUR 1.20), raha i Norvezy kosa no manana ny ambony indrindra (EUR 1.94). Ireo mpanjifa ao Makedonia dia tsy maintsy mamoaka EUR 1.4. Raha toa ny fanazavana ofisialy mikasika ny fisondrotry ny vidin-tsolika dia matetika ny fiovàn'ny solika tsy voadio, avoitran'i Zoriv kosa fa ny tena singa fototra mametra farany ny vidiny dia ireo hetra toy ny taxes d'accise izay mandeha mivantana mankany amin'ny kitapom-bolam-panjakana any amin'ireo firenena manana vidin-tsolika ambony be (Norvezy, Holland, Italia, Angeletera, ary Gresy). Manampy izy hoe :
Ao Makedonia, ohatra, ny fitambarana'ny hetra miaraka amin'ny tombony azon'ny mpaninjara alaina no manome ny 70€ amin'ny vidin-tsolika (Gazetim-Panjakan'ny Repoblikan'i Makedonia, laharana 138/09 sy 52/11). Ny elanelana misy eo amin'i Makedonia sy ireo firenena ao amin'ny Fiombonambe Eraopeana, etsy ankilan'ny resaka haavon'ny karana izay tsy azo ampitahaina mihitsy, dia ny zava-mampalahelo hoe na dia kely sy bitika aza ny fisondrotam-bidin'ireo zavatra azo avy amin'ny fanodinana solika dia miantraika any amin'ny fiainana ara-materialin'ny olona tsirairay ao Makedonia izany. Ny angona farany dia mampiseho fa ny fanjifàna solika dia nihena 30% [mk]. Ny sondro-bidin-tsolika dia niteraka fisondrotan'ireo fandaniana hafa ilaina amin'ny fiainana, raha toa kosa ka mitontongana izay tsy izy ny fahefa-mividin'ny tokantrano.
Ny governemanta Makedoniana dia nanafoana vonjimaika ny hetra talohan'ny fifidianana natao ny Jona 2011, saingy namerina izany taty aoriana, nanondrotra ny vidiny [mk] tamin'ny Aogositra.
Amin'ny fikajiana ny fatran-tsolika azon'ny olom-pirenena tsirairay vidiana amin'ny karama salantsalany, Zoriv dia nanandrana nitondra hazavana mikasika ny fitsinjarazaràn'ny vola miditra : ao Etazonia, afaka mividy solika 4.296 litatra ny olona iray amin'ny salan-karamany isam-bolana. Ao Eraopa, lasan'i Soisa ny toerana voalohany (3.441 l), Luxemburg (3.439 l), ary Alemàna (3.075 l). Ny any amin'ny faran'ny lisitra dia i Makedonia (243 l) ary Albania (194 l), miaraka aminà “taha mahamenatra 1.14″ raha mitaha amin'ireo firenena ‘manan-karena’
Araka ny famoahana isan-taona tamin'ny 2010 an'ireo Orinasa 200 Goavana Indrindra ao Makedonia, nokarakaraina sy navoakan'ny Euro Business Center – Skopje, ireo orinasa roa goavana indrindra ao amin'ny firenena dia : ny OKTA hany mpanodina solika (izay fampiasam-bolan'ny Grika, nalaina ho fananam-pirenena fony naha-minisitra misahana ny vola ny praiminisitra Gruevski) ary ilay mpaninjàra goavana ireo vokatra azo avy amin'ny solika, Makpetrol, izay manana fitambaram-bola miditra 512 tapitrisa Euro sy 350 tapitrisa Euro tsirairay avy.
Toa manjombona ny fara-vodilanitry ny hoavy. Araka ny tatitry ny PNUD “Tomba Ara-Toekarena Ny Fiantraikan'ny Fiovan'ny Toetrandro,” dia maitrika fanamby goavana hafa marobe ihany koa i Makedonia eo amin'ny sehatry ny angovo.
Ireo mpampiasa ny media sosialy dia nifampizara karazana angona samihafa mifandray amin'ny resaka fisondrotan'ny vidin-tsolika, toy ny tabilao [mk] mampiseho ny singa rehetra mandrafitra ny vidin'ny solika:
Ireo singa mandrafitra ny vidin'ny so-lika amin'ny Dinara Makedoniana.
Nampakatra ihany koa ry zareo ny fanehoan-kevitra samihafa momba ny fivoaran'ny adihevitra miainga amin'izao fotoana miaraka amin'ilay fisondrotry ny vidin-tsolika, ary ny tena betsaka ifampizaràna indrindra dia ireo fanehoan-kevitra miaro hanihany, toy ity vazivazy ity : “Te-hitondra ny sipanao mba ho any amin'ny toerana lafo va ianao? – Mba ento eny amin'ny tobin-tsolika izy!” Ny farany indrindra amin'ny fampihomehezana dia ny endrika tsy mampazoto manasongadina ilay mpitondra Yogosilavy teo aloha Josip Broz Tito sy fitanisàna iray amin'ny teny Kroaty heverina ho tsy dia be teny loatra
Sarin'i Tito sy fitanisàna iray: Lazainao fa hoe lasa lafo be ny solika? Raha izany, inona no antony tsy ifampiraharahano amin'ireo firenena tsy momba ny atsy na ny aroa?
Nandritra ny Ady Mangatsiaka, Tito dia nalaza tamin'ny fikatsahana fifandanjàna teo amin'ny vondrona Tatsinanana sy ny Tandrefana, niaraka tamin'i Yogoslavia nampiasaina ho toy ny mpanelanelana, mba ho tombontsoa ara-toekaren'ny vahoakany. Tamin'ny 1961, niaraka nanangana ny Hetsiky ny Tsy Mirona Amin'ny Atsy na ny Aroa izy, izay nahitàana firenena maro mpamokatra solika, nahatongavana taminà fifanakalozana ara-barotra nirindra. Ny ampahan-teny malaza momba ny politika sy toekarena nahalalàna azy dia ity (ao amin'ny Lexicon of Yugoslav Mythology) : “Ny voa voaraintsika avy amin'ny Amerikana dia ambony lavitra ara-kalitao noho ny voa izay tsy natolotry ny Sovietika akory.”